USB မှ Window တင်တက်စေဖို့ ( အပြည့်အစုံ) ~ မျိုးကို
USB မှ Window တင်တက်စေဖို့ ( အပြည့်အစုံ)
09:27 USB, USB Installation, Window7OS Installation2comments
USB မှ Window တင်နိုင်ဖို့ အတွက်
1.ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ စက်မှာ 64 Bit တင်ချင်လို့ စစ်ဆေးကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
2.ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Window ISO File တွေကို ဒီမှာ ရွေးချယ်ပီး Download ရယူနိုင်ပါတယ်...။
3. ISO File ကို Download ရယူပီးပီးဆိုရင် Rar File ကိုဖြေလိုက်ပါ...။
4. USB မှ Window တင်နိုင်စေဖို့ အတွက် Bootable USB ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲ ယူရမှာပါ..။ အဲလို လုပ်ဖို့ အတွက် USB Stick ကို Computer မှာ Plug ထိုးလိုက်ပါ...။
5.Bootable USB ဖြစ်အောင်ပြောင်းနိုင်စေဖို့ အတွက် ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင် တာကတော့ Win To Flash ဆိုတဲ့ Tool လေးပါပဲ ဒီ Tool လေးကတော့ ကိုယ်တို့ ISO ရဲ့ Components တွေ စုံလင်မှု ရှိမရှိပါ စစ်ဆေးပေးတဲ့ အတွက် အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်..။ လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်..။
1. ပထမဆုံးသူရဲ့ ဒီလို Interface လေးရှိမှာပါ..။
2.Advanced Mood ကိုသွားပါ..။ Task အောက်က Drop Down လေးမှာ ကိုပြောင်းမယ့် Window Version ကိုရွေးပါ..။
3.Create ကိုဆက်နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒီလို Interface လေးမှာ အပေါ်ကတော့ ISO File ရှိတဲ့ Path ကိုရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပီးအောက်ကတော့ USB ရှိနေတဲ့ Path ကိုရွေးချယ်ပီး Run ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါ..။ ပြောင်းလဲမှု ပီးဆုံးသွားရင်တော့ Finished လို့ပေါ်လာမှာပါ..။ ဒါဆိုရင်တော့ Window တင်ဖို့ အတွက် Bootable USB တစ်ခု ရပါပီ...။
အဲဒီလို Bootable USB ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တစ်ခြား Tool လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်..။
1. ဒီ Tool လေးကတော့ ISO to USB လေးပါ...။
2. ဒီ Tool လေးကတော့ Win To Bootic လေးပါ ..။
လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်..။
3.နောက်တစ်ခုကတော့ WinUSB Maker ပါတဲ့ ..။
ယူချင်ခဲ့ရင်တော့ ဒီိကို သွားလိုက်ပါ..။
အပေါ်က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Software တွေကိုမသုံးဘဲ Command Prompt ကနေ ပီး USB ကိုပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကို Thura ရေးတဲ့ USB မှ Window တင်နည်း PDF ကို ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်...။
USB Window တင်နည်း
1.ကွန်ပျူတာကို Restart ချပြီး Keyboard မှ Delete Key ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါ..။
2. BIOS ထဲကိုရောက်ရင် Advanced BIOS Features ကို select လုပ်ပြီး Enter ခေါက်ပါ ။
3.First Boot ကို USB HDD လို့ပြောင်းပေးပါ.။
4.Second Boot Device ကို Hard Disk လို့ပြောင်းပေးပါ..။
5.Keyboard မှ F10 ကိုနှိပ်ပြီး Save ပါ..။ ပြန်တက်တဲ့အခါ USB ကနေ၀င်းဒိုးတက်မှာပါ..။
ရိုးရိုး CD ကတင်နည်းစာအုပ်ကတော့ ဒီနေရာ မှာ ယူနိုင်ပါတယ်..။
၀င်းဒိုး တင်ပီး အပ်တီဗိတ် ဖြစ်စေဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ၀င်းဒိုး လုပ်ဒါ ကိုတော့
၀ပ် ဖစ် နဲ့ ၀င်းဒိ်ုး လုပ်ဒါ
ကိုစုဆောင်းထားသမျှကို အားလုံး တစ်ခါတည်း ယူချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့
လုပ်ဒါ (7) ခုထည့်ပေးထားပါတယ်
မင်း ထူး 1 May 2015 at 00:57
ကူးမရဘူးအကိုရေ link သေနေပီ